एमाले–माओवादीले आश र त्रास बाँडे, हामी विश्वास बाँड्दैछौं
इन्द्र बानियाँ, प्रदेशसभा उमेदवार, नेपाली कांग्रेस (मकवानपुर–२ (ख)
२०७४ कार्तिक २८ मंगलबार १४:४०:००
नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका पार्टी सभापति हुन् इन्द्र बानियाँ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित उनी यसपटक मकवानपुर– २ को (ख)मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि मैदानमा छन् ।
मकवानपुर जिल्लाका विकासप्रेमी नेता भनेर चिनिने बानियाँ गृह राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । बानियाँसँग स्थलगत रिपोर्टिङका लागि मकवानपुर पुगेको बाह्रखरीको टोलीले गरेको कुराकानी–
निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
निर्वाचनको प्रचार–प्रसार भइरहेको छ । सुरूआतमा गाउँस्तरका वडासम्म संयुक्त समिति बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छौँ । मकवानपुर २ को (ख)मा म उमेदवार बनेको छु । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको क्षेत्रमा ३० वटा वडा पर्छ । कैलाश, रागसिराङ, मनहरी गाउँपालिका हेटौँडा नगरपालिकाको १९ र ३ नम्बर वडा समेटिएको छ ।
१४ वटा वडामा संयुक्त कार्यालयसमेत खोलिएको छ । त्यसका माध्यमबाट हामीले निर्वाचन परिचालन व्यवस्थित गरिराखेका छौँ ।
०७० सालको निर्वाचनमा जुन क्षेत्रबाट तपाईं विजयी हुनुभयो, त्यो क्षेत्र छाडेर अहिले दुई नम्बरमा उमेदवारी दिनुभएको छ । फेरि प्रदेशसभामा झर्नु भएको छ, किन ?
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री गर्नेगरी प्रदेशसभा उठ्न भन्नुभएको हो । अहिले हेटौंडालाई अस्थायी प्रादेशिक राजधानी तोकिएको छ । त्यो हाम्रै आग्रहमा बनाइएको हो । यदि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बहुमत नआएको खण्डमा यो प्रदेशको विपक्षी दलको नेता पनि इन्द्रबहादुर बानियाँ बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको भावना छ ।
फेरि प्रदेशमा रहेर काम गर्ने र कांग्रेसले सपना बाँड्दैन । बोलेका कुरा पूरा गर्छ भन्ने अमीट छाप जनतामा छाड्न स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदेशसभा सदस्यमा उमेदवारी दिएको हुँ ।
हिजो जहाँबाट चुनाव जित्नुभयो, त्यहाँ तपाईंले सारेका योजना अधुरा थिए होलान् नि ?
दलीय व्यवस्थामा दल प्रधान हुन्छ । व्यक्ति गौण हुन्छ । व्यक्ति र व्यक्तित्व सहायक कुरा हो । हिजो मैलो चुनाव जितेको क्षेत्रमा कांग्रेस र कांग्रेसको प्रतिनिधि छन् । मैले जनताका बीचमा गरेका ९० प्रतिशत वाचाहरू पूरा गरेको छु, चार वर्षको समायवधीमा । बाँकी रहेका दश प्रतिशत कामहरू आज उमेदवार बन्नुभएका र भोलि निर्वाचित साथीहरूले गर्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रदेशसभामा रूख चिह्नकै उमेदवार हुनुहुन्छ, धर्म लामिछाने । मैले जनतालाई प्रष्ट भनेको छु, अब उहाँले गर्नुहुन्छ।
त्यहाँका अधिकांश मतदाताले ‘तपाईंले क्षेत्र छाड्नुभयो’ भनेर गुनासो पोखिरहँदा मैले विज्ञप्ति नै निकालेर भनिसकेको छु ।म मकवानपुर जिल्लाको पार्टी सभापति हुँ । कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको बखत जिल्लाभर जहाँ गएर पनि निर्वाचन लडेर जनताबाट कांग्रेसलाई अनुमोदित गराउनु मेरो जिम्मेवारी र दायित्व दुवै हो ।
मकवानपुरमा विकटता छ, जहाँ गरिबी छ, जहाँ चेपाङ र तामाङहरूको बाहुल्यता छ । गरिबी, अभावसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका चेपाङहरू गाँजाको भरिया बनाइन अभिशप्त छन् । व्यापारीले ५–१० हजारमा भरिया बनाउने, चेपाङहरू जेल पुग्ने, परिवार टुट्ने, बालबच्चाको विजोग हुने । यस्तो उदेकलाग्दो अवस्थाको अन्त्यका लागि म यहाँ रोजेरै आएको हुँ ।
त्यसकारण हिजो निर्वाचित भएका ठाउँका जनता ढुक्क हुँदा हुन्छ– म जुनसुकै बेलामा पनि विकासको नेतृत्व गर्नेछु । जनताको दुःख–सुखमा हाजिर हुनेछु ।
एमाले–माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढेपछि कांग्रेसलगायत इतरका शक्तिहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर अघि बढेको अवस्था छ, मकवानपुरमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अवस्था कस्तो छ ?
मकवानपुरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । अन्त वामपन्थीले के गरे थाहा छैन । मकवानपुरमा हिजो एमालेले आशैआश बाँडेको हो । माओवादीले त्रासैत्रास बाँडेको हो । कांग्रेसले चाहिँ जनतालाई बोलेको कुरा पूरा गर्दै विश्वास बाँडेको छ ।
कांग्रेसले हिजो राणा शासन अन्त्य गर्यो । राजालाई संविधानको दायराभित्र ल्यायो । संवैधानिक नभएपछि राजा पनि हटायो । संविधान पनि कांग्रेसले दियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो । र, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कांग्रेसले नै गराइरहेको छ । मकवानपुर जिल्लामा बारबार जित्दा पनि कम्युनिस्ट, विशेष गरी एमालेले पटकपटक जितेको छ । माओवादीले पनि एकपटक जितेको छ । तर, उनीहरूले जितको महसुस दिलाउन सकेनन् । एउटा पनि काम गर्न सकेनन् । जनताको जीवनस्तर माथि उकासिएन ।
एकपटक कांग्रेसको नामबाट मैले जित्दाखेरि ६ सय करोड रुपैयाँ ल्याएर मकवानपुर–१ मा खर्चिएको छु । अतः कांग्रेसप्रति मानिसको भरोसा बढेको छ । इन्द्र बानियाँ जित्नेबित्तिकै मन्त्री हुने, डिना उपाध्याय जित्नेबित्तिकै मन्त्री हुने । डिना दुई नम्बरको प्रतिनिधिसभातर्फ उमेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ कांग्रेसले नजित्दा पनि मन्त्री बनेको व्यक्तित्व हो ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा हरेकपटक सरकारमा रहने व्यक्तित्व । यी र यस्ता व्यक्तित्वले मकवानपुरको विकास गर्न सक्छन् भन्ने यहाँका जनताका अटल विश्वास छ ।
मकवानपुरबाट विजयी हुने एमालेका उमेदवारले सहायकमन्त्रीसमेत भेट्टाउन सकेका छैनन् । जनताका बीचमा यी गर्न नसक्ने, राज्यबाट पैसा ल्याउन नसक्नेहरूलाई जनताले भोट दिन्नौँ भनेका छन् । हामी जित्ने कुरामा निश्चिन्त छौँ ।
हिजो जसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सङ्घर्ष गर्यो, तपाईंहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ, राजसंस्था नेपाली कांग्रेसले नै फाल्यो । तर, राजा फर्काउनुपर्छ, राजसंस्था व्युँताउनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने कमल थापाहरूलाई बोकेर हिँड्नुपरेको छ, दुःख त लागेको होला नि ?
राजालाई संवैधानिक बनाएजस्तै कमल थापालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आउने बाटो फुकाएका छौँ । कमल दाइ हिजोका बाटोमा कहाँ हुनुहुन्छ र ?
संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत घोषणापत्रमै गर्नुभएको छ । र, १ नम्बरमा त्यही प्रतिवद्धतापत्र थमाउने हो तपाईंहरूले ?
कांग्रेस समुद्र हो, समुद्रमा आइपुगेको खहरे आफैँ संग्लिन्छ । समुद्रकै बाटो तय गर्ने हो उसले । राप्रपाको घोषणापत्रको कुनै तुक छैन । कांग्रेसकै बाटो हिँड्ने हो ऊ ।
मकवानपुरमा वाम गठबन्धन कमजोर छ त भन्नुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन नि ?
स्थानीय तहमा जनताले स्थानीय स्तरका उमेदवार छानेका हुन् । आफूलाई सुविधा र पायक पर्ने । राष्ट्रिय चुनावमा त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन । स्थानीय तहमा त कोही, मामा, कोही काका उठेका थिए ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फका वाम गठबन्धनका उमेदवार जिल्लाभरि गन्हाएका छन् । सेन्ट छरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका उहाँहरूका गतिविधिले उहाँहरूलाई दुर्गन्धित तुल्याएको छ । प्रतिनिधिसभामा जनताको बीचमा केही नगरेका व्यक्तिहरूले टिकट पाएका छन् । २६ वर्ष अगाडिकै पुरानो अनुहार । जनताका बीचमा सिन्को नभाँचेकाहरू पुनः कसरी अनुमोदित हुन्छन् ? प्रदेशसभातर्फ पनि त्यस्तै भरोसा नै नहुने उमेदवार छन् । वाम गठबन्धनका उमेदवारदेखि जनता निराश छन् ।
त्यसो भए लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चाहिँ मकवानपुरको विकासका लागि के गर्छ त ?
लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सुरूआतमै हेटौंडालाई प्रादेशिक राजधानी बनाइसक्यो, अस्थायी रूपमै भए पनि ।
हामीले पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेर त्यो गरेका हौँ । के सजिलो भयो भने, कमल थापा पनि सरकारमा हुनुुहुन्थ्यो ।
धरान–चतरा सडक मकवानपुरको विभिन्न गाउँ हुँदै आइरहेको छ । नीजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्गले हेटौँडा हुँदै जान्छ । कान्ति लोकपथ काठमाडौँ गइरहेको छ ।
३ नम्बर प्रदेशका जनता ३ घन्टाभित्र हेटौँडा आइपुग्ने अवस्था बन्दैछ ।
जसरी अस्थायी रूपमा प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई बनायौँ । त्यसैगरी स्थायी राजधानी पनि हेटौँडालाई बनाउँछौँ हामी । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्दामात्रै हुन्छ त्यो ।
मकवानपुर औद्योगिक नगरी हो । प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र हुनेगरी अर्को क्षेत्र बन्दैछ । ५०० उद्योग बनाउनेगरी डीपीआर बन्दैछ । र, सरकारले रकम विनियोजनसमेत गरिसकेको छ ।
यी सबै देख्दादेख्दै जान्दाजान्दै जनताले अरूलाई भोट हाल्दैनन् ।
यहाँले सुरुआतमै भन्नुभयो, मकवानपुर डाँडाकाँडाले घेरिएको, चेपाङ, तामाङआदि पिछडिएका समुदायको बसोबास स्थल हो, तिनको जीवनस्तर उकास्न के गर्नुहुन्छ ?
मनहरीदेखि मास्तिर रागसिराङ गाउँपालिकाभित्र काँकडा, खैराङ, सरिखेत । त्यो भन्दा माथि कैलाश, गोगने, डाँडाखर्क, कालिकाटार, नामटार आदि ठाउँका मानिस आयआर्जनको विकल्प नभएपछि गाँजा खेती गर्न बाध्य छन् । व्यापारीहरूले गाँजा खेती गर्न लगाउने, त्यहाँका चेपाङ, तामाङ भरिया बन्ने । ३–५ वर्ष जेल जाने, बालबच्चाको विजोग हुने । त्यो अवस्था अन्त्यको लागि बाटो पुर्याउँछु । गाँजा खेती गर्न अभिशप्त, बेच्न विवशहरूलाई विकल्प दिन्छु । चेपाङहरूलाई जेल जान दिन्नँ ।
पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्छु । अहिले बाटो छैन, बाटो भएको भए त्यो दूरवस्था झेल्नुपर्दैनथ्यो ।
त्यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अलैँची, सुन्तला खेती आदिमा जोड दिने हो भने त्यसक्षेत्रका मुहार फेर्न सकिन्छ । मकवानपुरको उत्तरी बेल्टमा चरम गरिबी छ । त्यसको अन्त्यका लागि सेवा गर्न पाउँ ।
भनेपछि मकवानपुरका ६ क्षेत्र ( २ प्रतिनिधिसभा, ४ प्रदेशसभा) लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्छ ?
हामी दुई प्रनिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा सबै जित्छौँ । जनताको मत पर्खिइरहेका छौँ ।